TSG, Onye Mmekọ Vislink iji kwado Nkwalite Ntanetị ATSC 3.0 nke Ọchịchị na Alabama Public Television | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Mgbasa Injinia Mgbasa Ozi
Home » News » TSG, Vislink Onye Mmekọ iji kwado Nkwalite Ntanetị ATSC 3.0 nke Ọchịchị na Alabama Public Television
TSG, Vislink Onye Mmekọ iji kwado Nkwalite Ntanetị ATSC 3.0 nke Ọchịchị na Alabama Public Television
Baton Rouge, La., Mee 3, 2021 - Nka na ụzụ Ọrụ Group (TSG), a na-eduga na agbasa ozi n'ikuku engineering na azụmahịa AV ngwọta na-eweta, taa mara ọkwa ya e ọdịda nke bidoro iji kwalite na steeti microwave nkesa usoro maka Alabama Public Television (APT) na-akwado ATSC 3.0 nnyefe. Dika ihe di $ 2.8, oru ngo a gha acho nkwalite nke 30 ebe nwere uzo abuo, uzo IP di elu site na Vislink, Inc. (Nasdaq: VISL), onye ndu teknụzụ zuru ụwa ọnụ na nchịkọta, nnyefe, na njikwa nke elu- mma ndụ vidiyo na data metụtara.
"Tupu anyị enwee ike ịkwalite na ATSC 3.0 na ndị na-ebugharị anyị, anyị ga-enwerịrị netwọk IP n'elu sistemụ microwave emere iji jikwaa akara ngosi ATSC 3.0," kọwara Windell Wood, onye isi injinia na COO maka APT. Usoro ugbu a dị kemgbe 2010, ma nwee ike ịkwado ATSC 1.0.
Netwọk APT na-eji ndị na-ebugharị iteghete na ndị na-emegharị 21 iji chekwaa mkpuchi steeti. Ihe mgbaàmà nna ukwu ahụ sitere na ụlọ ọrụ ntanetị na ọdụ APT, flagship WBIQ, na Birmingham, Ala. na saịtị ọ bụla.
Igwe ihe ntanetị nke vidio nke Vislink nke ime ụlọ niile, nke gosipụtara ngosipụta ihuenyo na nhicha ihu n'ihu n'ihu na chassis 2RU, ga-ekwe ka APT gbanwee site na njem ASI ọdịnala gaa ụlọ ọrụ sistemụ IP-centric. Usoro ohuru a ga - ejikwa Protocols Network Management Network (SNMP), nke ga - enyocha ma jikwaa ahụike nke netwọọdụ APT.
Ma TSG na Vislink arụ ọrụ na APT n'oge gara aga. Dịka ọmụmaatụ, n'oge FCC Repack na-adịbeghị anya, TSG dochiri ndị ntụgharị IOT atọ na GatesAir ndị nkesa-steeti siri ike maka APT, ya mere Wood nwere obi ike na ụlọ ọrụ nwere ikike ịkwalite sistemụ nkesa microwave. Ọ gbakwụnyere, "Ọrụ anyị masịrị anyị nke ukwuu."
Mickey Miller, onye isi oche nke Vislink kwuru, "Alabama nwere otu n'ime ụlọ ọrụ telivishọn ọha na eze kachasị mma na mba ahụ, yana otu n'ime ihe nrụpụta microwave siri ike." “Anyị na APT rụkọrọ ọrụ ihe karịrị afọ 20, ma anyị nwere obi ụtọ ịnọgide na mmekọrịta anyị ka ha na-akwado maka mbugharị ATSC 3.0 ma na-aga na ngụkọta IP-centric network. TSG bụ ụlọ ọrụ na - enweghị atụ nke na - eweta nnukwu ọrụ aka, ma anyị ejikọtara mmekọrịta anyị ọnụ. ”
A na-atụ anya na ọrụ ahụ ga-amalite na mbido ọkọchị ma mechaa site na njedebe nke afọ. Site na ndozi (na nri njikere njikere) nke sistemụ ahụ, APT ga-enwe ike iwelata ma ọ bụ zere ọgba aghara mgbaàmà n'oge mmelite ahụ, dị ka Wood si kwuo.
Ozugbo etinyere ATSC 3.0 n'ofe steeti ahụ, a ga-ekenye otu akụkụ nke bandwit na ọrụ mmepụta ihe, gụnyere ndị uwe ojii na ngalaba ọkụ, ebe akụkụ ga-enwe nkesa nke akara ngosi ATSC 1.0. A ga-ekenye bandwid ndị fọdụrụnụ na nri ATSC 3.0.
Ihe ọzọ dị elu nke teknụzụ dị na atụmatụ APT maka nkuchi ATSC 3.0 bụ netwọọdụ eriri dị iche, nke dị ugbu a na nhazi atụmatụ, nke ga-ejikọ saịtị ntanetị 30 niile na steeti. Njikọ eriri ga-enye mgbakwunye nkwụghachi ụgwọ na enweghị ntụpụ maka APT.
“ATSC 3.0 bụ nzọụkwụ na-esote na mmalite nke telivishọn na agbasa ozi. Site na mmesi ike ha na akụrụngwa, Alabama Public Television dị n'ihu ụzọ, "Bo Hoover, onye isi oche nke TSG kwuru. "Mgbanwe nke APT na ATSC 3.0 ga-abụ ihe nlere maka netwọkụ ndị ọzọ na steeti, anyị nwere obi ụtọ isoro Vislink rụọ ọrụ iji nyefee azịza a."
Banyere Vislink, Inc.
Vislink bụ azụmahịa azụmaahịa zuru ụwa ọnụ ọkachamara na nchịkọta, nnyefe, na njikwa nke ogo dị elu, vidiyo vidiyo na data metụtara site na ọnọdụ nke omume na ihuenyo ikiri. Maka ahịa mgbasa ozi, Vislink na-enye azịza maka nchịkọta nke akụkọ ndụ, egwuregwu, na ihe omume ntụrụndụ. Vislink na-enyekwa onyunyo na nchekwa ahịa na ezigbo oge ọgụgụ isi vidiyo na-eji ọtụtụ ngwaahịa nnyefe ahaziri. Ndị otu Vislink na-enyekwa ndị ọrụ aka ọrụ aka na teknụzụ na ndị ọrụ nke ndị ọkachamara na teknụzụ na ọtụtụ iri afọ nke ihe ọmụma etinyere na ahụmịhe nke ụwa n'ezie na mpaghara nke microwave nke ụwa, satellite, eriri optic, onyunyo, na usoro nkwukọrịta ikuku, iji nyefee ọtụtụ ụdị ahịa ndị ahịa. A na-erere ụlọ ahịa Vislink nke Ahịa Ahịa na Nasdaq Isi Obodo Ahịa n'okpuru akara akọrọ "VISL." Maka ama ndị ọzọ, gaa na www.vislink.com.
N'ihe karịrị afọ 30 nke ahụmịhe ụlọ ọrụ, Technicaltù Ọrụ Nka na ụzụ na-enye ìgwè ndị injinia na ngwọta ndị ọkachamara na-arụ ọrụ site na imewe. Site na ndị mgbasa ozi gaa na ụlọ nchịkwa, TSG na-enye nhazi, nrụnye, ndozi, yana ọrụ jikwaa maka ndị mgbasa ozi redio na telivishọn. Azụmaahịa AV anyị na-eweta ngosipụta dị egwu na njikwa teknụzụ maka ebe egwuregwu, ọfịs gọọmentị, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ofufe, ụlọ ọrụ ahụike na saịtị nnabata. Tupu ị gawa ndụ, gaa tsgcom.com.
Previous: Emechara “Ku'damm 63” nke Germany na HDR na DaVinci Resolve
Osote: Grass Valley's Cloud-based Platform, GV AMPP, na-enyere Corrivium aka ịgbanye Virtual Event Productions